Gịnị bụ uru nke ultrasonic ịgbado ọkụ?
Site na mmepe ngwa ngwa nke mmepụta ihe eji eme ihe, a na-eji plastik n'ọtụtụ ebe na akụnụba mba na ndụ ndị mmadụ n'ihi uru ha dị n'ibu arọ, ike dị elu, njigide corrosion na nhazi dị mfe. Ultrasonic ịgbado ọkụ nwere ike izute mkpa nke dị iche iche p ...GỤKWUO »
The Core Ultrasonic akụkụ maka nkpuchi Ime Machine
QRsonic bụ ọkachamara na-emepụta ọkachamara na nyocha na mmepụta nke ike transducers ultrasonic. Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ transducers na ultrasonic ike onunu. N'ime ha, 15k na 20k ultrasonic transducers na ike onunu ka ọtụtụ-eji dị ka isi co ...GỤKWUO »
Olee otú ịhọrọ Ultrasonic Transducer?
Dị ka anyị si mara, ultrasonic transducer bụ ụdị ike akakabarede ngwaọrụ. Ọrụ ya bụ ịtụgharị ikike eletrik ntinye n'ime ike igwe (ultrasound) wee nyefee ya, ọ na-eri obere akụkụ nke ike (ihe na-erughị 10%). Ya mere, ihe kasị mkpa echiche choo ...GỤKWUO »